Nezvedu - Smart Weight Packaging Machina Co, Ltd.
Tireyi kurongedza Machine
Smart Weigh yaendesa akawanda misoro weigher kurongedza muchina kune nyika dzinopfuura makumi matanhatu. Smart Weigh yakagadzwa muna 2012 nefekitori yayo yekutanga iri muHenglan taundi, Zhongshan guta, Guangdong, China, uye chinangwa musika mhiri kwemakungwa. Vatangi vatatu veSmart Weigh ndivo vari pamusoro pekugadzira michina, kuronga uye kushambadzira, mabhizinesi ekambani aya akura nekukurumidza nekuda kwechikamu chakatarwa, Smart Weigh yakatamira mu4500m2 fekitori yemazuva ano mugore ra2017.
Smart Weight Packaging Machina Co, Ltd yakagara ichisimbisa kupa zvinoshanda uye nekuzvitakura kuyera uye kurongedza michina yekugadzirisa pamitengo inonzwisisika. Unhu hwemeshini uye hunoshanda hwavaka hukama hwakanaka uye hwakareba nevatengi. Panguva imwecheteyo, isu tiri sosi yekubatanidza! Zvinoreva kuti tinopa zvinorema, muchina wekurongedza, masimendi, tarisa uremu uye nezvimwe - Mutsara wakakwana wekutakura wemabhegi, mbiya, mabhodhoro nemabhokisi.
Isu tinobudirira mukutora mutoro wakakwana pasi peZVINOGONESA, DZAKANYANYA uye KUDZIVA!
Isu tinoisa pakupa mhinduro chaidzo uye yepamusoro mushure mekutengesa sevhisi kumutengi, ita shuwa kuti tinosangana nezvido zvako zvekushandisa. Semugadziri anozvishingisa uye anotengesa mutsara wehuremu, kuwanda kwehuremu, kusimbisa simbi yekumusoro simbi yekuzadza chisimbiso muchina, rotary pouch kurongedza muchina, simbi michina, uremu hwekuyera uye auto kuyera uye masisitimu ekuzadza, takafarira sarudzo dzako uye takazvipira kupfuura zvaunotarisira. .
fekitori yemazuva ano nehunyanzvi hwemberi
iripo yakagadziriswa multihead weigher
Uwandu hwegore rega hwekutakura mutsara
24 × 7 maawa
Kwekare-kukwegura kuyedzwa kunoona kugadzikana kwemuchina
Smart Weight inotsemuka kuburikidza nehuwandu hwemashure kuyera kune mamwe maindasitiri ezvikafu akadai seyechichi, mupunga wakakangwa, manhanga, saladi, michero mitsva, nyama, chizi, rizi keke, soseji, nzungu kusanganisa, makabhegi kusanganisa uye nezvimwe. uye ane ruzivo rwakanyanya pakuronga masenduru ekutakura mitsara pamusara weiyo yevatengi chirimwa.
Shure-rekutengesa timu ine gumi vane hunyanzvi mainjiniya vanotsigira mhiri kwemakungwa / epamba mushure mekutengesa sevhisi uye online basa.
Kero: Kuvaka B, Kunxin Industrial Park, Nhamba 55, Dong Fu Road, Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China, 528425
Runhare: + 86-760-87961168